Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Aeroflot dia mitaky ny hanaovana vaksiny ny mpanamory fiaramanidina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Mpanamory fiaramanidina enina Aeroflot no mandà ny jab COVID-19, mihantona tsy misy karama
Ny mpanamory fiaramanidina enina miasa ho an'ny kaompaniam-piaramanidina iraisampirenena lehibe any Russia dia voadidy ary nampiato ny asany amin'ny lalàna mamela ny orinasa hamoaka am-pahombiazana ireo mpiasa izay tsy mety hisoratra anarana amin'ny vaksinina amin'ny virus COVID-19.
Aeroflot mampiato ny mpanamory fiaramanidina noho ny fandavany ny jab COVID-19.
Nandà ny hisoratra anarana hanao vaksinin'ny coronavirus ny mpanamory naato.
Ny sendikan'ny mpanamory dia nitaraina tamin'ny CEO Aeroflot, niantso ny fampiatoana ho fanavakavahana.
Ny kaompaniam-pitondrana masera rosiana Aeroflot, izay an'ny fanjakana rosiana ny ankamaroany, dia nandefa mpanamory fiaramanidina enina tsy vita vaksiny farafahakeliny na fialan-tsasatra tsy misy karama, hoy ny mpitondra tenin'ny mpitatitra.
Mpitondra tenin'ny Aeroflot nilaza fa mpanamory fiaramanidina enina no napetraka tamina fialan-tsasatra tsy misy karama satria nifidy ny tsy hahazo jab. Saingy, ny isan'ny mpanamory natsahatra dia miniskule raha oharina amin'ny haben'ny mpiasan'ny Aeroflot amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny mpanamory fiaramanidina 2,300 ao amin'ny paompin'ny orinasa.
Ny sendikan'ny mpanamory fiaramanidina dia nitaraina tamin'ny CEO Aeroflot Mikhail Poluboyarinov noho ny fanavakavahana, tamin'ny filazany fa ireo mpiasan'ny sidina tsy voamarina sy ireo mpiasa mpanohana ara-teknika dia tsy miatrika fandroahana mitovy amin'izany.
Igor Delduzhov, ny filohan'ny Sheremetyevo Ny Trade Union of Flight Personnel, miorina ao amin'ny seranam-piaramanidin'i hub Aeroflot ao Moskoa, dia nivoaka tamin'ny fanapahan-kevitra hanala ireo mpiasan'ny sidina. Raha ny fanazavany, ny valiny henjana amin'ireo izay nisafidy ny tsy hanao vaksiny dia tsy mendrika izany, satria manodidina ny 84% ny mpiasa dia voalaza fa efa voanona.
“Tsy misy kaompaniam-pitaterana rosiana hafa manana fampiatoana mitovy amin'izany,” hoy i Deldyuzhov tao anaty taratasy tao amin'ny tranonkalan'ny firaisana.